Fanye: Codeless Mobile App Engagement Atụmatụ | Martech Zone
Fanye: Codeless Mobile App Engagement Atụmatụ
Tọzdee, Septemba 22, 2016 Wednesday, September 28, 2016 Douglas Karr
Insert Ezubere ya ka ndị ahịa wee nwee ike ime mkpọsa ngwa mkpanaka na-enweghị mkpa maka mmepe ngwa mkpanaka. Ikpo okwu nwere ọtụtụ ntinye aka nke nwere ike itinye ngwa ngwa, emelite, ma jikwaa ya. Ewubere ọtụtụ atụmatụ maka ndị na-ere ahịa na ndị otu ngwaahịa iji hazie njem onye ọrụ, na-ebute oge ọ bụla, mụbaa njikọ aka, ma tụọ ma nyochaa arụmọrụ nke ngwa ahụ. Ngwa ndị a bụ ụmụ amaala iOS na gam akporo.
Ejiri atụmatụ ndị ahụ banye na mpaghara ọrụ asatọ, gụnyere Nduzi, Nkwukọrịta, Nụcha, Gbanwee, Mee, Nweta, Nghọta na Nchọpụta. Ndị na-esonụ bụ atụmatụ nkọwa si Fanye ntuziaka ngwaahịa.
Guide Abanye na-enyere gị aka ịga nke ọma n'ụgbọ ọhụrụ ọrụ na-ekpughe ndị dị na ndị ọzọ atụmatụ na ike.
Ntughari ngwa - Na-ebuli ahụmịhe nke oge mbụ nke ndị ọrụ gị. Jide n'aka na ha ghọtara uru nke ngwa ahụ site na igosipụta isi atụmatụ nke ngwa ahụ site na iji carousel na-egosi mgbe onye ọrụ mbụ meghere ngwa ahụ.
Gosiputa Mpaghara Ngwa - Dịrị ndị ọrụ anya na ngwa ngwa akọwapụtara site na “ịkọwapụta” mpaghara a na ederede nkọwa. Ọ dị mma maka ịbanye, ma ọ bụ iji ụgbọala mee ihe ọhụụ.
Ngwaọrụ ekwentị - Nye ngwa ọrụ mkpanaka nke na-akọwa bọtịnụ ma ọ bụ atụmatụ, yana ederede na-ezo aka na ngwa ngwa ahụ, atụmatụ ma ọ bụ ịkpọ oku.
Na-atụ aro Njirimara Ngwa - N’okwu dị mma, gwa ndị ọrụ ka ha jiri otu ngwa ngwa akọwapụtara ma were ha ozugbo na ngwa ngwa dị mkpa, na-eji njikọ miri emi.
Communications Abanye na-ekepụta mkparịta ụka ezubere iche na ndị ọrụ site na izipu ozi na oge kwesịrị ekwesị, nke sitere na iji ngwa a, site na akụkọ ihe mere eme nke onye ọrụ ma ọ bụ ngwa ngwa oge na ihe ndị ọzọ, enwere ike lekwasị anya iji mee ka onye ọrụ jiri aka ya na ozi ahụ.
Na-ngwa ngwa - Ozi ngwa-ngwa na-agwa onye ọrụ, enwere ike ijikọ ya na njikọ ma ọ bụ njikọ miri emi, na-anya ngwa ngwa. Ozi a na - etinyekarị onyogho na bọtịnụ oku na - eme ihe nke nwere ike iduga onye ọrụ na ihuenyo ngwa ngwa.
Interstitial - Interstitials bụ ihe ngosi zuru oke na ihuenyo na-arụ ọrụ n'etiti ihuenyo, mgbe otu ihuenyo na n'ihu nke na-esote.
Ozi vidio - Ndị ọrụ hụrụ vidiyo n'anya, na ozi vidiyo bụ ụzọ dị mma iji kpọsaa ozi 'mmetụta' ma ọ bụ mgbagwoju anya nke na-agafe ọkwa ọkwa ọkwa.
Banner - N'adịghị ka interstitial, ọkọlọtọ bụ obere ihe clickable nwere ike igosipụta n'akụkụ dị iche iche nke ihuenyo ahụ. Site na ịtinye ọkọlọtọ ala na ngwa gị, ị nwere ike ịkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ gị n'emebighị ngwa ngwa ha, ebe ọkọlọtọ anaghị egbochi ha iji ngwa ahụ.
Dezie na-enyere ụdị aka ime mgbanwe dị iche iche na ngwa ahụ iji chụpụ njikọ aka, site na imezi ederede ederede, onyonyo ma ọ bụ gburugburu.
Gbanwee ederede - Nwere ederede ma ọ bụ chọọ ịnwale A / B ọtụtụ nhọrọ ederede? Chọrọ ịgbanwe ederede ederede maka oge pụrụ iche ma ọ bụ ezumike? Chọrọ ịgbanwe ederede ozugbo onye ọrụ mechara ihe ụfọdụ na ngwa ahụ? Kaa akara ederede ịchọrọ idobe na ihuenyo ngwa ahụ, jiri ederede ọhụrụ dochie ya ma ị ga-aga.
Gbanwee Image - Gbanwee onyonyo ngwa iji dozie nsogbu ngwa ma ọ bụ iji hụ ihe onyonyo na - eme ka ọfụma aka. Mfe enweghị koodu, ọbụlagodi mgbe a gbanwere mgbanwe oyiyi naanị maka ụfọdụ ọnọdụ, ụfọdụ ndị na-ege ntị ma ọ bụ oge.
Gbanwee Okwu - Gbanwee ngwa ahụ iji nye usoro isiokwu oge, dịka ezumike ma ọ bụ ozi ụlọ akwụkwọ.
akakabarede Emere ntinye iji mepụta ebumnuche ịzụta yana iji hụ na ọ kwụsịrị na nzụta n'ezie. Ha mepụtara ebumnuche ịzụta, mana oge iji ihe ncheta ụgbọ nwere ike ibugharị ndị ọrụ iji bido ịzụrụ ihe agbahapụ.
Coupon - Iji gwa ndị na-azụ ahịa ihe ị na-enye na ihe kpatara ha ga-eji zụta ugbu a, ị nwere ike gosipụta onyinye ị ga-eji rụọ ọrụ na coupon. Pị na ya na-ewe ndị ọrụ na ngwa ngwa dị mkpa ma ọ bụ mepee ihe nchọgharị.
Ihe ncheta Cart (push) - Mgbe ndị ọrụ ka nwere ihe dị na ụgbọ ala ha, mee ka ha laghachite wee mezue zụrụ ya na ozi nkeonwe nke nwere njikọ miri emi na ngwa ngwa ngwa.
Na-ngwa Ozi - na ntinye ngwa ngwa enwere ike iji chetara ndị ọrụ ụgbọ ala ha hapụrụ ahapụ oge ọzọ ha malitere ngwa ahụ.
ọdịda Page - mepụta peeji nke ọdịda ahaziri nke ọma n'ime ngwa ha, na-ahụ na ndị ahịa na-abịa site na ọkwa ọkwa nke onwe, mgbasa ozi, mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ozi ịntanetị gaa na peeji nke ahaziri iche nke kachasị maka mgbanwe kachasị.
Interstitial - Interstitials bụ ihe ngosi zuru oke na ihuenyo na-arụ ọrụ n'etiti ihuenyo, mgbe otu ihuenyo na n'ihu nke na-esote. Ha na-eduzi ndị ọrụ na ihuenyo ngwa ma ọ bụ ibe weebụ ma na-ejikarị ebufe ozi na-emetụ oge dịka ire ere taa, nkwalite wdg.
-arụ - Ebumnuche ntinye ma na-ebute ha, ọbụlagodi na arụmọrụ dị mgbagwoju anya.
Tinyegharịa ndị ọrụ nọ jụụ - Re-ekere òkè ụra ọrụ site na iji pụrụ iche obere oge na-enye, ozi ezubere iche na ndị ọzọ. Kọwaa na ndị ọrụ ụra na-ehi ụra ma chekwaa onyinye dị iche iche maka akụkụ nke ọ bụla.
Nabata Ndị Ọrụ Na-ehi ụra - Kọwaa onye ndị ike gị bụ, dabere na usoro ojiji ha na ndị ọzọ, ma gosipụta ekele gị site na onyinye pụrụ iche, ego, nnweta ma ọ bụ nkwalite.
Ntughari Version - Mepụta ozi ngosi ngwa-ngwa nke na-agwa ndị ọrụ nnweta ụdị ngwa ọhụụ, na-ejikọ ya.
Nweta - Nnweta inserts na-eto eto ngwa ọrụ isi site mma ngwa Fim ma ọ bụ ngwa cross-nkwalite. Categorydị a chọrọ onye nwe ngwa ahụ ka ọ nwalee oge kwesịrị ekwesị, ka ndị ọrụ wee nweta ntinye ihe na-agaghị egbochi iji ngwa ahụ.
Ihe Nleba Ihe Nleba - Jiri ntinye a iji mee ka ndị ọrụ kesaa ngwa ma ọ bụ ọdịnaya ya na mgbasa ozi mmekọrịta.
Nkwalite obe - Cross-akwalite ngwa ndị ọzọ, site na ịtụ aro ha n'aka ndị ọrụ nke ngwa ahụ.
Dịruru ngwa - Jụọ ndị ọrụ maka akara ngwa na oge kwesịrị ekwesị - mgbe ha nwere ezigbo ahụmịhe mkpanaka - na-enweghị ịkwụsị ha. Anyị na-akwado ịhọrọ ndị ọrụ ike nke ngwa gị, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịnye ọkwa dị elu.
ịghọta - Inweta azịza ziri ezi maka ajụjụ gbasara mmasị onye ọrụ, njirimara ma ọ bụ nzaghachi bụ ihe dị mkpa nke ngwa ngwa mkpanaka. Otu a gụnyere nyocha, nchịkọta ma kwado ntinye.
Ihe Nlereanya Ghọta Ntinye - Jikọọ na ndị ọrụ gị iji nweta nzaghachi nke oge na njirimara ngwa ọhụụ, uru ngwa, mmasị onwe gị, na isiokwu ọ bụla ọzọ, na-eji nyocha otu ajụjụ.
Otutu ajuju ajuju - A nnyocha e mere na otutu ajụjụ nwere ike ọkọnọ na otu ihuenyo ma ọ bụ na a mmịfe.
Mbupụ na nchịkọta google - Ntinye a na - enye gị ohere itinye akara maka mmemme ị ga - achọ iji soro na ihuenyo ahụ, jiri ntanetị weebụ anyị, wee nwee nchịkọta banyere ihe omume ahụ zitere na oge na akaụntụ Google Analytics gị.
Nchọpụta na-enyere ụdị aka iji mepụta ntinye omenala site na iji ọdịnaya HTML ọ bụla, iji gosipụta ebe ọ bụla na ngwa gị, jiri otu ikike ahụ iji kpalite ihe ntinye n'ime ngwa ahụ, njirimara onye ọrụ yana ịlele ụfọdụ ndị na-ege ntị.
Tags: na-ngwana-ngwa ahịana-ngwa izi ozina-eji ngwa mobile ozitinyeetiti etitimobile ngwamobile ngwa nyochamobile ngwa Kupọnsmobile ngwa nzaghachimobile ngwa matamkpanaka ngagharịmobile ngwa ahịanjikarịcha ngwa mkpanakamobile ngwa ekwusaramobile ngwa inupụ ozimobile ngwa na-atụ aro nzaghachimobile ngwa nnyochannwale ngwa mkpanakangwa mkpanaka ngwa ngwangwa mkpanaaka nkwalite ozimobile ngwa ijengwa mkpanaka ịnabata ozimobile ngwa ọdịnalaKupọns ekwentịinterstitial nke na-agagharị agagharịmobile video ozinyocha maka ngwa ekwentịnyocha nyocha maka ngwa ngwa ekwentị
DeviceRank: Ọnụ nke Mobile App Wụnye na itinye aka Wayo